Kedu ịgba ịnyịnya ígwè na-eme ụkwụ gị? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Kwụ na-agba agba - olee otu ị ga-esi edozi
Kedu ịgba ịnyịnya ígwè na-eme ụkwụ gị?
Cygba ígwèmma n'ozuzu ọrụ nanke giala ma na-ewusiụkwụ gịakwara n'etinyeghị ha nsogbu. Ọ zaanke giquads, glutes, hamstrings, na umu-ehi.Ọnwa Mbụ 21, 2020
Bob na Brad ♪♪ Fiziotherapists abụọ a kacha mara amara ♪♪ Na Ntanetị ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị niile bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụike na --ntanetị - N'echiche anyị , n'ezie, Bob .- M na-agwa Brad, ị hụrụ nke ahụ, m na-aga ya n'ihu.- Ah, o nwere m! 'Ọ dị ka m na-azụ ọzụzụ - a ga m asị na enwere m ọtụtụ ederede.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha. Anyị nwere akụkọ gbasara etu ị ga - esi gbasie ike, kwesịrị ekwesị, ma nwee ihe mgbu, anyị na - ebunye ha kwa ụbọchị. Chọrọ ịga na weebụsaịtị anyị bobandbrad.com.
Oge ụfọdụ dị ka akwa ụra ụra, ụdị ihe ahụ nwere ike ịbụ. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịgakwuru Bob na Brad na Facebook, a tụdoro ya na elu peeji ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ ụdị anyị dị mkpirikpi na Twitter na Instagram. Bob, dịkwa mma.
Anyi aga agaa? - Eeh. - E-e, anyị nwere ike ịkwụsị ịghasa pedal nwa oge ka anyị wee nwee ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị okwu nke ọma. Ya mere, ihe buru ibu na nsogbu azụ, ikpere mgbu nke metụtara ịnyịnya ígwè bụ àgwà.
Ebee? Kpakọba oche ahụ na ala dị ezigbo mkpa, na-aga n'ihu na azụ bụ ihe na-esote, mgbe ahụ, ogo aka gị dị oke mkpa iji wepụ nsogbu n'azụ gị - ihe anyị nwere ebe a bụ na anyị nwere ọkwa abụọ dị iche iche nke ịgba ígwè ebe a. Anyị nwere igwe kwụ otu ebe, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ na-abụkarị ndị na-abụghị ndị ọgba tum tum, anaghị ekpuchi ọtụtụ kilomita, ga-enwe onye na-enye ọzụzụ. Ọ bụghị eziokwu mgbe niile - ọ bụ m - na nke ahụ bụ ọgba tum tum.
Maka onye ọ bụla, ikpe na-esiri ike ịwebe iji belata nrụgide dị ala na m ga-ekwu maka nke ahụ n'otu oge, anyị ga-anọ, yabụ ozugbo ị gbakọtara igwe kwụ otu ebe maka ịchọrọ ịchịkọta ya nke ọma ma ọ bụghị ya, a ga-akpọ ya onye si mba ozo. - Nke ahụ abụghị mma? Yabụ ugbu a- - Ana m agwa gị - abughi m ọkachamara na nke a ma ọlị, mana m na-ahụ nke a oge niile ma echere m na ọ na-agba m ara, ọkachasị oche ahụ dị ala. - Aka nri, aka nri.
Oche a dị ala karịa bụ nsogbu kasịnụ. Bob, gịnị kpatara na ị gaghị arịgo igwe kwụ otu ebe anyị ga - ekwu okwu - nke mbụ --- ịchọrọ ka m n’ịgba ịnyịnya ígwè gị gosipụta ihe ọ dịka mgbe ị - ee, achọrọ m ihe ole na ole ị ga - ebu ụzọ kwuo. Nweta igwe kwụ otu ebe na onye na-azụ gị, nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma.
Oh, agakwala n'ihu.- tinye ụkwụ ihu n'ihu na nkwado, ihe mgbaru ọsọ bụ ime ka igwe kwụ otu ebe gị wee nwee ike ịga axle, a ga m enweta teknụzụ ebe a ugbu a, mana ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụrụ naanị nwere onye chọrọ izugbe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya n'ozuzu, ọ dị mma, anyị nwere nke a. Lee oche ahụ, ọ bụrụ na i lee oche Bob anya, ị ga-ahụ na ọ dịtụ obere.
Ọ bụghị ọkwa na Bob mere mkpesa. Ọ sịrị: ee, ọ naghị ata ahụ. Ọ na - eche mgbe niile ka a na - achụ ya azụ ma ọ na - enweghị ahụ iru ala na perineum ma ọ bụ prostate ahụ, nke ahụ nwere ike ibute nsogbu na mpaghara ahụ ma ị chọghị nke ahụ.- Kpọmkwem.- Yabụ oche a kwesịrị imebi, nke bụ ihe anyị na-eme ugbu a agaghị eme, mana nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ ma emechaa ebe a - enwere m ekele maka ya, Brad.
Enwere m ekele na ị mere mgbanwe ebe a, yabụ - Ya mere kwadebe ihe niile, ugbu a ị banyere, Bob. Ugbu a, anyị edozila ya ka Bob nwee ike isi ụkwụ. Bob nwere, m na-akpọ ha ndị na-eme mkpọtụ, ụfọdụ ndị na-akpọ ha onu mgbe ịnweghị mkpirisi ma ọ bụ pịlịlị enweghị aka, mana anyị ga-ebu ụzọ kụọ ụlọ ahụ.
Nke ahụ dịkwa mma maka ihe anyị na-ekwu. Ọ dị mma, Bob, gịnị kpatara na ị gaghị azọ ụkwụ naanị ịnọdụ ala. Yabụ, tinye bum gị na ihe a na-anọkwasị n'elu ya ka ọ wee daa ma ọ bụ nwee ahụ iru ala, ebe ahụ ka ị na-agakarị? - Aka nri, aka nri - O dikwa.
N'ime ụwa na-agba ịnyịnya ígwè a na-akpọ nke a sadulu. Mgbe m kwuru ịnọdụ ala, ha na-ekwu ihe ịnọdụ ala, enweghị echiche? - Aka nri, aka nri. - Agbanyeghị, ka anyị gbadata 6:00 ọnọdụ na na pedal, ị chọrọ nke a --- m na-n'ezie na-alaghachi a obere n'ihu, nri? - Nri. - Ka a pụọ. - The axle, ị nwere ike Bulie ụkwụ gị? - Ee.- Ogwe aka nke pedal kwesịrị ị kwụ n'ahịrị na mpaghara gị, ebe ahụ, ndị buru ibu, m na-agagharị na bọọlụ ụkwụ.- Sure.- Aka nri ebe mkpịsị ụkwụ jikọtara ma ị nwere nkwonkwo ndị a, nke a bụ ọnọdụ ziri ezi maka ụkwụ na pedal. Ọnọdụ 6:00, ụkwụ na ọkwa ala, yabụ ee, ị nwere ike ihulata dorsa, bob? Ee, nke ahụ ga-abụ ụzọ pere mpe, ma ọ bụrụ na ọ dị, gbagoo ebe ahụ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ nke ọma, ka anyị mee ya n'ụzọ ziri ezi ma anyị leba anya na ikpere ikpere.
Ugbu a, agala m onye klaasị-kụziri klaasị --- ọ dị n'azụ gị, Brad - etinye m ebe ahụ ka m wee ghara ile anya - (Bob na-achị ọchị) Ndị dibia ahụike na kinesiologist, ha bụkwa ọtụtụ igwe kwụ otu ebe rode, mụọ na h, ha bụ ndị ọkachamara kachasị mara na ndị maara ihe n'ọhịa, ha wee sị n'agbata itoolu na 14 ogo nke ikpere ikpere bụ ogo ziri ezi. Ugbu a ọ bụrụ na anyị elee Bob anya, amaara m na ịnweghị goniometer, mana ị nwere ike ịgafe na-enweghị ya, ọ bụrụ na m tụọ ya ugbu a ọ ga-enwe ogo 50 nke mgbatị ikpere - Chaị - oche doro anya na ọ dịkwa obere. Ikpere a na-enweta nnukwu nsogbu karịa oge, yabụ gịnị kpatara na ị gaghị ebili Bob, igwe kwụ otu ebe a mara mma n'ihi na oche ahụ dị mfe idozi, aga m agbago ihe dị ka anụ ọhịa na ọkara, nke na-arụ ọrụ nke ọma a isiokwu .Obu mgbe ị ga-esi na a spana na-eme na.
Ugbu a laghachi na pedals, Bob. Feel na-eche nnukwu ọdịiche? - Ehee. - Ma anyị ga-ahụ na ị nwere ike ịdị oke elu. - Ọ nwere ike, ọ dị ka a ga - asị na ọ fọrọ nke nta ka m ruo ọgwụgwụ - Bịanụ, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị gbadata aka ịpị ụkwụ ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị oke elu.
Gini mere ịlaghachi azụ na 6: 00 ụtụtụ Ee, enwere m ike ịhụ na ị dị elu.
Yabụ ị nwetara oche ahụ n'ụzọ ahụ, ị ​​nwetara ogo ya - - Ugbu a ọ na - adị - Ọ dị ka anyị dị nso - Ọ na - adịkwa n'ihi na ị kwagidere ya nke ọma. - Nri - I wee chọpụta ọdịiche. - Ee, ee- - O di mma, ya mere.
Ọzọ anyị ga-aga ọnọdụ 3:00, ya bụ, 12:00 dị ebe a, ugbu a anyị nọ n'ụkwụ atọ, anyị kwesịrị ịchọpụta ma oche ahụ kwesiri ịga n'ihu ma ọ bụ azụ. Ihe kacha arụ ọrụ nke ọma bụ na ị na - eji pọmpụ kwụ ọtọ, yabụ enwere m obere bọmbụ ebe a. Anyị ga-ekokwasị ya na ikpere ma ọ bụ ikpere, ị nwere ike ijide ya, Bob? - Chọpụta. - Gaba, daalụ, zuru okè.
Yabụ ọ nọ ọdụ n'oche anyị ga-ahụ nke ahụ. Ugbu a n'ọnụ ọnụ boumb pọm ahụ kwesịrị ịgbakọ na axis nke pedal, nke dị ebe a. Yabụ oche ya ga-aga n'ihu n'ihu nke anụ ọhịa site na mgbe anyị gafere isiokwu a.
Aga m ebugharị oche ahụ n’ihu ma mezie ya ka anyị nwee ike inweta ọnọdụ a n’ụzọ ziri ezi. - Magburu onwe. - Ugbu a, anyị emeela ya n’oche.
Have nwere igbe nkpuchi dị njikere maka ịpụ. - Gotcha.- Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ya, nke ahụ bụ ihe m masịrị ịkpọ ya.
Na nke na-esote bụ azụ. Kedu ka anyị kwesịrị isi mee ka nrụgide anyị na-ada azụ kwụsị? Ugbu a, akụrụngwa elliptical nwere ụdị njikwa nwere ike bụrụ ihe kachasị mma maka ịbelata nrụgide azụ. Have nwere azụ mgbu ma ọ bụ sciatica, nke na-eme ka ị kwụrụ ọtọ, ọ dị mma.- Ee, ị chọghị ịdị ka nke ahụ.- Kpọmkwem, kpọm kwem.
Ezi.- Amaghi m ka m si adi? Ahụ m? - look dị ebube, Bob. - Echere m, mmata ahụ m bụ - Oh mba, achọghị m ịgwa gị eziokwu, mana ọ bụrụ na nwunye gị na-ekiri, ị maara.
Ya mere enwere ike idozi elu ebe a, ị nwere ike ịtọghe nke ahụ, ma n'ezie, ọ bụrụ na ọ dị elu, ọ ga-ewelata nchekasị n'azụ ya, ee, n'ezie nwee nnukwu dị ka o kwere mee. .- O nwere ike ịbụ, ọ dị ezigbo mma - ma ị nwere nke dị mma, ee, n'ihi na enwere ike ịtọ ebe a, - Oh, nke ahụ bụ - - N'olu- - amaghị m nke ahụ.- I nwere mgbanwe abụọ dị iche iche, aka nri.
Ma ị dịkwa elu dị ka ị nwere ike. Ọ nwere ike ịga obere elu. Ugbu a ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye na-agba ịnyịnya ígwè, ị na-eche banyere ọsọ ma na ịchọrọ ịbelata azụ mgbu, ha anaghị adaba.- Right.- Ebe ọ bụ na ị dị ka ụgbọ mmiri, ị ga-ejide ifufe, ọ ga-akwụsịlata gị , ma na ọ bụ ya na ị ga-achụ àjà maka azụ gị. - Nke ahụ bụ eziokwu, naanị ihe m na-eche bụ ịkwagide ahụike m y.- Nke ahụ bụ etu m si bụrụ.
Amaara m na site na igwe kwụ otu ebe m ebe a, etinyegoro m n'ụgbọ ịnyịnya, ọ na-enye nrụgide karị maka azụ m. Ọ bụrụ na ị lelee anya ebe a, enwere m onye na-arụ ụgbọ ala na-eme nyocha ọzọ na ọkara dị elu karịa ka ọ na-adịkarị, ọ na-ebelata m, mana agbanyeghị, nke ahụ ka m si arụ ọrụ ya. Na oge ụfọdụ m ga-aga karịa elu ma ọ bụ nweta igwe elliptical, ọ dabere na azụ m na-eche ka m banyere 80s na 90s. (Ọchị) Enwere m nchekwube ugbu a! - Atta nwata, enyi! Ọ masịrị m! - Ya mere pụọ, Bob.
Kwụpụ, ọ dị mma. Ya mere e guzobere igwe kwụ otu ebe na Bob ga-agabiga ihe ọzọ gbasara mgbu na nkasi obi zuru oke na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị nwere igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma, enwere m aerobars na m n'ihi na m na-eme triathlons, na mgbakwunye, enwere m mmasị na ya.
Mgbe ị nwetara ya mkpịsị aka gị na-ada ụda ma ị nọ na dobe ma ọ bụ ihe dị na mkpuchi, ma ọ bụ na ị nọ ebe a na aka nri m na-amalitekarị ịda ụda. akwara a, n'ihi ya, m banye n'ọnọdụ ahụ ma jide ya n'ebe ahụ. O siri m ike ntakịrị n’azụ m, ma ọ na-ewe m ụfụ na aka m.
M na-agakarị n'elu ụlọ dị ka nke a, enwere m mmetụta nke ọma karịa na azụ m. Na-eme ka ifufe jiri nwayọọ belata m ma azụ m na-adị mma karịa n'oge a, ana m aga ogologo oge, aga m echekwa azụ m wee rụọ ọrụ ya ebe a. Ya mere Bob, ọ bụkwaghị ajụjụ maka gị? - Ee e, mana enwere m ike ịsị ugbu a ọ dị mkpa ibuli oche m gaa n’ihu.
N'ihi na m ga-edozi azụ m, m nọ na mkpịsị aka m, yabụ --- ee, ọ bụ eziokwu - ọ dị m ka ọ bụrụ na ị bụ ugbu a ị tụrụ aka, dasthi enweghị iru ala! - ee! Ga-ejedebe na nsogbu prostate. Ọ bụrụ na ịnweghị-- - Ee, aga m-- bụkuo soprano ebe a - yabụ, echere m na anyị ekpuchichaala ya, Bob-Ee, ọ dị ezigbo mma. - Ihe na-ama ezigbo mma yabụ melite igwe kwụ otu ebe gị nke ọma, agbagola na-ekwesịghị ekwesị, ma nwee ihu igwe. (Uda) Oh Bob, nke a bụ --- Obi dị m ụtọ na ị dị otu a, m ga-edozi igwe kwụ otu ebe, aga m anọ n'ọnọdụ dị mma - Ọ dị mma, anyị ga-asịkwa ọma ugbu a - Ọ dị, Adios! - Na na ị nwere ike nzọ.
Linggba ígwè na-enye gị ụkwụ buru ibu?
Azịza dị mkpirikpi maka ma ọ bụịgba ígwèna-aga-eme kanke giụkwụ ukwubụ - mba. N'ezie,ịgba ígwèmma gịụkwụakwara, ma dị ka mmega ahụ nke ikuku, ọ na-arụ ọrụ ntachi obi gị, na-eme ka ha nwekwuo ike ọgwụgwụ mgbe ị na-azụ ọzụzụ, mana ọ gaghị eme ka ha bulie elu.Jun 21, 2018
Gịnị mere ụkwụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji buru oke ibu?
“Ọkachamarandị na-agba ígwènwee akwara akwara ụkwụ ụkwụ buru ibu karịa ndị na -ndị na-agba ígwè, ”Ka Gottschall na-ekwu. Karịsịa akpọpụta bụ akwara quadriceps nke na-akụda pedal ala, yanaburu ibuakwara hamstring nke na-enyere aka ikpochapu ụkwụ.Ọnwa Mbụ 25, 2021
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji enwekarị akpụkpọ ụkwụ?
Iheụkwụakwara ị na-ewuịgba ígwèanaghị abụkarị ndị nnukwu, mana sinewy na rock siri ike. Roadzọ ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ na-akwụsi ike, mgbatị ahụ, ogologo oge mmega ahụ. Kinddị mmega ahụ na-ere ọtụtụ abụba. Ya mere ị na-ahụ ndị ọgba ọsọ ogologo na ụzọigwe kwụ otu ebenke ahụ bụ nnọọmkpa.
Cycgba ígwè ọ na-enyere aka n’apata ụkwụ?
Ha abụọịgba ígwèna igba oso nwere ike inyere akagịụda naebughibualaụkwụ gị. Ka eweretẹchaa ụkwụ gị,gịga belatanke gin'ozuzu abụba ahụ. Ha na agba oso maịgba ígwèdị irè maka kadio na abụba na-ere ọkụ. Mgbe ejikọtara ya na iri nri dị mma,ụkwụ gịgaebughibugbadata ma nweta nkọwapụta akwara.Eprel 6, 2018
Ee,ịgba ígwènwere ike inyere akaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Abụọ 2, 2021
Nwere ike ịgba ígwè ebughibu?
Cygba ígwèbụ nnukwu mgbatị ịgbakwunye na ahụ ike gị. Ọ bụ mmega ahụ dị oke irènwere ikeenyere aka belataafọ abụbama mezuo ebumnuche ọnwụ gị ngwa ngwa. Ọ bụ mmega ahụ dị oke irènwere ikeenyere aka belataafọ abụbama gbaruo ebumnuche ọnwụ gị ngwa ngwa.Jun 4, 2018